ZESA Yotsvaga Nzira Dzekugadzirisa Matambudziko Ayakatarisana Nawo
Gumiguru 04, 2007
Imwe nyanzvi mune zvemagetsi inoti, mutemo weElectricity Amendment Bill, uyo wakatambirwa nedare reseneti neChitatu, hausi kuzoita kuti dambudziko rekushaikwa kwemagetsi riite nani.
Bhiri iri, rangomiririra kusainwa nemutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, kuti rive mutemo, uye rakatarisirwa kudzika mutongo wakaoma kune vanobatwa vachiba tambo dzemagetsi nezvimwe zvinoshandiswa neZESA.
Gurukota rebazi remhando dzemoto, Retired Lieutenant-General Mike Nyambuya, vakaudza dare reseneti kuti nyaya dzehumbavha ndidzo dziri kukonzera kushaikwa kwemagetsi kwakanyaya.
Asi vaimbove Chief Executive Officer veZESA, Engineer Simbarashe Magwengwende, vaudza mutori wenhau we Studio 7, Carole Gombakomba kuti kunyange hazvo nyaya dzehumbavha dzawanda , bhiri iri, harina zvarichanyanyobatsira nazvo pakushaikwa kwemagetsi munyika sezvo dambudziko iri, riri kunzi ratowedzerwa zvakanyanya, mumasvondo maviri apfuura.
Ukuwo mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kutarisirwa kuisa runyoro rwavo pabhiri remutemo we Indigenization and Economic Empowerment Bill, mumazuva mashoma anotevera, zvichitevera kutambirwa kwebhiri iri nedare reseneti.
Asi nyanzvi munyaya dzezviwanikwa pamwe nedzehupfumi, dzinoti hurumende yave kuzvisikira moto muziso. Mutemo uyu unosungira kuti vanhu vatema vatore zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kumakambani ose evachena neevamwe vekunze kwenyika.
Vemakambani vakawanda vanoti vambomira kuwedzera mabasa muZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka mumigodhi nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi.
Chief Executive Officer veZimbabwe Chamber of Mines, VaDouglas Verden, vaudza Studio 7 kuti vanyorerana chibvumirano neZESA kuti vakwanise kuwana magetsi kubva kuCahora Bassa, Mozambique vachizvitengera havo magetsi nemari yavo yekunze sezvo hurumende iri kukundikana.
Doctor Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute.
Mutori wenhau weStudio 7, Blesssing Zulu abvunza Doctor Kanyenze kuti vanoona sei nyaya yekutorwa kwemakambani pamwe nemigodhi.